कोरियामा मृ’त्यू भएका गगनको बैशाखमा विहे गर्ने योजना रहेछ, मृत्यूपछि उनकी प्रेमिकाले लेखिन् मनैछुने यस्ताे स्टाटस - Nepali in Australia
April 1, 2021 autherLeaveaComment on कोरियामा मृ’त्यू भएका गगनको बैशाखमा विहे गर्ने योजना रहेछ, मृत्यूपछि उनकी प्रेमिकाले लेखिन् मनैछुने यस्ताे स्टाटस
दक्षिण कोरि`याको ४ बर्ष १० महिना पुरा गरी अबको १० दिन पछी अप्रिल तारिखका दिन नेपाल आउने पर्खा`ईमा बसेका गगन रावल कोरि`यामै अ’स्ताएका छन। उनि सु`र्खेत समाज दक्षीण काेरि|या संस्थाका पुर्ब सदस्य समेत रहेका थिए। उनि एकदमै सह`योगि मनका धनि रहेको सहकर्मी साथि`हरुले बता|एका छन
। हिजो राति कारि`याको समय अनुसार करिब २:३० बजे ए’क्का शि ठु’लो स्वरमा आ’वाज आउदा उनका रुममा भएका सा`थिहरु हेर्न पुग्दा ए’क्का शि बे’हा स भएको अव’स्थामा उन`लाई पा|इएको थियो। त्यसपछि हेर्न जाँदा उनी भुइँमा बे`होस भेटि|एका थिए।
दक्षिण कोरियामा ४ बर्ष १० महिना बसि|सकेका उनी अप्रिलमा नेपाल आउने योज`नामा थिए। ह’र्ट अ ट्या’कका कार’ण उनको यो अव’स्था भएको हुन सक्ने सुर्खेत समा`जका नि बर्तमान अ|ध्यक्ष लोकेश खत्रीले फेसबु`क स्टाट`समार्फत जान|कारी दिएका छन्।
साथै सुर्खेत समाज दक्षिण को`रिया संस्थाका अध्यक्ष बखत थापा, संस्थाका सल्लाह`कार तुलस सर लगाए`तको टिम हॉ’स्पिटल मा पुगिसक्नु बताइएको छ। उहाँको यस दु’ख द नि’ध नमा स’मस्त नेपाली लगायत सुर्खेत समा`ज दक्षिण को`रिया परिवार भा’ब बि’वल भएकोछ। गगन हामि मा’झ नभ ए पनि उनले छाो’डेर गएका उनका सहयोगि हात`लाई संस्था|ले कहिल्यै नभु’ल्ने सुर्खेत समाजले ब`ताएको छ।
त्यस्तै गगनको असामयिक मृ त्यु भए पछि उनकी प्रेमिका भावविह्वल बनेकी छिन् । आफ्नो फेसबुकमा प्रमिल फोटोहरु राख्दै एउटा लामो भावुक स्टाटस लेख्दै गगनलाई बिदा गरेकी छिन् । उनको स्टाटस यस्तो छ ।
के भयो यस्तो मलाई विश्वास लागिरहेको छैन तिमी यो संसारमा छैनौं भन्ने । यति चाँडै छाडेर जानु थियो भने माया किन लायौ, अब तिमी र मैले देखेका सपना कसरी पूरा हुन्छन् हम? यदि जानु नै थियो भने मलाई पनि साथै लागेर जानु नी किन यो संसारमा मलाई एक्लै छाडेर गयौ ?
तिमी बाहेक मलाई माया गर्ने कोही छैन यो संसारमा अब खोइ म आफूलाई कसरी सम्हालु ? ठिकै छ , तिमी म भन्दा पहिला गयौ होइन अब म पनि आउँछु तिमी संगै अनि हाम्रो सपना उतै पूरा गरौंला । कान्छु प्लिज आउन, हामी बैशाखमा बिहे गर्ने भनेको होइन ? किन यस्तो गरेउ किन छाडेर गयौ ?
दैव पनि कस्तो रहेछ चोखो माया गर्ने लाई कहिलै साथै संगै बाँच्न दिँदैन, अरु म के लेखु नहीं निशब्द छु । यो कुरा झुठो हो भन्दिए हुन्थ्यो नी कसैले !